अन्तराष्ट्रिय – PostKathmandu
राजधानीको प्रतिष्ठित होटेल नजिकै कार विष्फोट, १४ जनाको मृत्यु
सोमालियाको राजधानी मोगादिसु स्थित एक प्रतिष्ठित होटेल नजिकै गराइएको आत्मघाती कार विष्फोटमा परी कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु भएको यहाँको सरकार बिहीबार जनाएको छ । विष्फोटबारे सरकारका प्रवक्ता अब्दियाजिज अली इब्राहिमले भन्नुभयो, “राजधानीस्थित एक होटेल नजिकै विष्फोटक पदार्थले भरिएको कार विष्फोट गराइँदा कम्तिमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा केही सर्वसाधारण घाइते भएका छन् ।” घटनालाई देखेको बताउने एक सोमालियाली नागरिकले कारलाई एक्कासी ल्याएर होटेल नजिकैको विजुलीको खम्बामा ठक्कर दिएपछि ठूलो आवाजसहित विष्फोट भएको बताए ।घटनाको जिम्मा समाचार तयार पार्दासम्म कुनै समूहले लिएको छैन । यो पनि पढ्नुहोस : काठमाडौं १ चैत्र– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै एक महिनापछि केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य गरेका छन् । फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले शुक्रवारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस
RIP-संसारकै सबैभन्दा बढी तौल भएकी महिलाको निधन
संसारकै सबैभन्दा बढी तौल भएकी चर्चित महिला एमान अहमदको निधन भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को अबुधाबीस्थित बुर्जिल अस्पतालले उनको मुटु र मिर्गौलाको इन्फेक्सनका कारण मृत्यु भएको जनाएको छ । उनि लामो समय देखि उच्च रतचाप र मधुमेहको रोगि भएको बताइएको छ । एमानको उपचार २० जना चिकित्सकहरूको टोलीले गरिरहेको थियो । एमानको तौल ५ सय किलोग्राम थियो । उनी केही समयअघि शल्यक्रिया गरेर तौल घटाउन भारत आएकी थिइन् । एमान मिश्रकी नागरिक हुन् । यसै वर्षको जनवरीमा उनी आफ्नो तौल कम गराउन भारत आएकी थिइन् । एमानको मुम्बईको सेफी अस्पतालमा उपचार भएको थियो । भारतीय डाक्टरहरूले उनको सफल शल्यक्रिया गरेर तौल घटाएको दाबी गर्दै आएका थिए । डाक्टरहरूले उनको शल्यक्रियापछि तौल घटाएर ५ सय किलोग्रामबाट २ सय ५० किलोग्राम बनाएको बताएका थिए । यद्यपि एमानकी बहिनीले भारतीय चिकित्सकहरूले पुरै झुठो बोलेको आरोप लगाएकी छन् ।
भर्खरै चिनले गर्यो रक्तपातपूर्ण युद्धको घोषणा ! चीनको फाईटर विमान भारत छिर्यो (भिडियो)-
भर्खरै चिनले गर्यो रक्तपातपूर्ण युद्धको घोषणा ! चीनको फाईटर विमान भारत छिर्यो (भिडियो)- यो पनि पद्नुहोस महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् । सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा रहेको राउतवेंशी गाविसको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा यस्तो आस्था बोकेर जाने भक्तजनको आकर्षणले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई उजागर समेत गरिरहेको छ । हरेक वर्षको पुस महिनामा धान्यपूर्णिमाका अवसरमा साताव्यापी विषेश मेला, शिवरात्री, साउन महिना तथा हरेक सोमबार दुप्चेश्वर मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ । यहाँ मुख्यतः सन्तान नहुने दम्पतिहरु सन्तान माग्न आउने र महादेवको भक्तिपछि दैवी शक्तिले सन्तान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । धान्यपूर्णिमादेखि एकसाता लाग्ने मेलाल
बिहानै आयो दु:खद खबर
जिप्टको उत्तरी क्षेत्रमा दुईवटा यात्रु रेल ठोक्किँदा कम्तिमा ४१ जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा परि एक सय २० जना भन्दा धेरै घाइते भएको इजिप्टका स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् । तटीय शहर एलेक्जान्ड्रियामा यो दुर्घटना भएको हो । राजधानी कायरोबाट आउँदै गरेको र पोर्ट सईदबाट आउँदै गरेको रेल नेपाली समय अनुसार शुक्रबार बेलुका ६ बजे ठोक्किएका हुन् । दुर्घटना लगतैदेखि उद्धार तथा राहतको काम भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन । इजिप्टमा यस किसिमको रेल दुर्घटना निकै कम हुने गरेका छन् । यातायात मन्त्री हिशम अराफतले मानवीय त्रुटीका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने बताउनुभएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ । उहाँले घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिनुभएको छ ।साभार //www.morangonline.com यो पनि पद्नुहोस महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटक
नेपाली बालक बेच्न खोज्ने भारतीय नागरिक पक्राउ
बालकलाई बेच्न खोजेको आरोपमा एक भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका ५ बेल्हानी बस्ने मुन्ना कलवारको ७ वर्षीय छोरा नब्या कलवारलाई ललाईफकाई भारत बेच्न लान लागेको आरोपमा प्रहरीले भारतको उत्तर प्रदेश महराजगंज जिल्ला डोमहा बस्ने ५० वर्षका धु्रव हरिजनलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका हरिजनले बालकलाई बेच्न लान लागेको बालकको बुवा मुन्ना कलवारको आरोप छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख मुकुन्दराज आचार्यका अनुसार गत मंगलबार (चैत्र ६ गते ) साँझ ४ बजेको समयमा आरोपित हरिजन बेल्हानी बालकको घरमा रहेको पसलमा रक्सी खान आएका थिए । हरिजन सधैँ बालक नब्याको घरमा रहेको पसलमा रक्सी खान आउने गर्दथे । हरिजनले मौका छोपी बालकलाई मिठाई दिई मामा घर लाने भनि फकाई साईकलमा चढाएर लगेका थिए । सँझ बालक घरमा नदेखिएपछि घरपरिवार र गाउँभरि बालकको खोजतलास शुरु भएको थियो ।
भखरै आयो तिन करोड नेपालीलाई ढुखको खबर कुबेतमा ५ नेपालीलाई मृत्‍युदन्ड तपाईंको १ सेयरले उनिहरुको यसरी जिबन बाँच्न सक्छ ।
भखरै आयो तिन करोड नेपालीलाई ढुखको खबर कुबेतमा ५ नेपालीलाई मृत्‍युदन्ड तपाईंको १ सेयरले उनिहरुको यसरी जिबन बाँच्न सक्छ । कुवेतमा ५ जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। लागूऔषध कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चितवनका जीवन रानाभाट, काठमाडौंका लाक्पा शेर्पा, कास्कीका पदमबहादुर गुरुङ, बाँकेका तारामान केसी र निमा शेर्पालाई त्यहाँको तल्लो अदालतले हालै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो।उनीहरू सुलेबियास्थित केन्द्रीय कारागारमा छन्। कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका सजन कार्कीलाई भने अदालतले आजीवन कराबास सजाय तोकेको छ। आफू निर्दोष रहेको भन्दै पुनरावेदन गरेका कार्कीलाई उच्च अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको हो। रानाभाट दुई वर्षअघि पक्राउ परेका थिए भने अन्यलाई एक वर्षअघि पक्राउ गरेर लागूऔषध कारोबारको मुद्दा चलाइएको थियो। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौकुव